BARNAAMIJKA GUULAYSTAYAAL GEEDDIGA WADAAY QEYBTIISA 4-AAD – WARSOOR
“DURUUSTA MAAMUL-WANAAGGA KU TOOSNAANTEEDA” W/Q Haldoor Rashiid Sulub Caalin
‘Koontiinarro ubax ah Faraawil( macmal ah oo Caag laga sameeyey), oo sannad walba aynu dibadda ka soo waaridno, isla markaana ay malaayiin doolar oo lacag adag ahi ku baxaan, Halkii aynu Rubuc-Qarni dhan Adduunweynaha ka baryeynay inay Biyo Caasimadda inoo galiyaan’.
‘Maan-gurracan iyo Garasho-jaan, Laangaruusal soo gado soona bari galley’
Ugu horrayn, waxaan Ilaahay ka baryeyaa inuu inaga aqballo salaadda roob-doonta ah ee aynu tukannay iyo ducaddii aynu barinay, oo Ilaahay inaga dul-qaado dhibaatada abaartan waddanka halakaysay.
Mar labaadkana waxaan halkan tacsi uga dirayaa saaxiibkay aqoonyahankii iyo abwaankii ku geeriyooday magaaladan Hargeysa arbacadii dhowayd MAXAMED JAMAC KAYD.
Sida aynu badankeenu la soconno waayaha adduunkani subax walba khayr iyo sharba Maalin walba waji gooniya ayuu inoo la yimaada. Shaqooyinka ay u xil saaran yihiin Abwaanadda iyo Qorayaashuna waxay dul hoganaysaa kolba wajiga subaxdaa uu waayuhu wato,inay u tolan Shaadh iyo Sirwaalka amma Diraca iyo Shalmadda ay is leeyihiin waad u xidhi kartaan, si ay bulshada culuum dheeraad ah uga siiyaan si ay u fahmaan wajiga maalintaa waayuhu leeyahay iyo wacyiga jira, iyagoo aan ka gabban kana waaban xilkoodaas. Waana arrin soo jireen ahayd abidkeed.
Qaddiyadaasi waxaynu masal ugu soo qaadanayna, badhtamihii sideetamaadkii markii ay Soomaaliya ka dheragtay dagaallo, abaaro iyo talo-xumeeyin is barkaday. Isla markana maamul-wanaaggii lagu horumari lahaana daqadda laga xooray, oo loo guntaday dano shaqsiyeed, reereed iyo mid kooxeed, ayaa Abwaan Cabdi Muxumed Ilaahay ha u naxariistee, isagoo tabiya waayaha aynu kor ku xusnay ayaa sidii looga bartay wuxuu hab suugaaneed dhar qurux badan ugu xidhay hees caan noqotay oo maskaxda dadkii markaa joogay yar iyo waynba gashay, oo ay ku luuqayso Saado Cali Warsame ilaahay ha u naxariistee oo la odhan jiray ‘Maan-guracan iyo garasho-jaan, Laangaruusal gado soo bari Galley, gacaliyo tolloow, maad guddoonsataan, baahida gudboon ee guryeheena taalla’. Ujeeddada ay xambaarsan tahay heestaasi oo iska waadixa, waxay taagan tahay maanta iyadoo waji kale leh. Taasna waxaan uga socdaa in Maanta dalkeenii aan gacmaheena ku dhaxalsiinay talo-xumo aynu kaga leexanay maamul-wanaaggii la wada manaafacsan lahan.
Arrinkas maamul-wanaagga laga leexday, oo si ulakac looga leexday meel fog ka dooni mayno, oo waxa caddayn inoogu filan, in maanta waddankeena Soomaaliland gudihiisa aad ku arkayso, iyadoo la keenayo Faraawillo Caag ah oo dabadda laga soo waaridayo. Halka ay ku baxaan lacag malaayiin Doolar oo aan inaga gu’i karayn , iyadoo dadkuna ay ka iibsanayaan Bacadlayaasha si ay ugu qurxiyaan Guryahooda amma Xafiisyadooda.
Haddaba, garashadan-jaan ee faraawiladaas inoo geeysey, oo aanay jirin wax macno ah oo ay ku soo kordhinayaan nolosheena dhinac kasta markaad ka eegto, iyadoo ay qirayaan Culimadda baratay Cilmiga Bulshada Iyo kuwa ku takhasusay Cilmiga Kimistariga iyo kuwa kuwa ku takhasusay Caafimaadka Bulshada iyo culimadda Beeraha, oo ay xaqiijiyeen in dhib mooyaane aanay dheef lahayn. Haddaynu wax yar ka soo qaadano faraawiladda caagga ah ee guryaha iyo xafiisyadda la dhig-dhigo, waxay ka samaysan yihiin kiimiko aan u fiicnayn nadaafadda guriga iyo ta dadkaba. Tusaale ahaan, waxa fuulla faraawillada duqsiga iyo cayayaanka kale oo hoy ka dhigta kuna dhala. Marka ay muddo yar yaallaana waxay noqdaan qaar la tuuro, oo waxa is beddela arragoodda iyo urtooda. Waxaana qoomamo mudan xafiisyada iyo guryaha lagu sharaxo, gaar ahaan marka xafladaha iyo aroosyada lagu sharaxo, iyadoo ay jiraan dad la jaar ah amma goobta yimid oo laga yaabo inaan dabkaba loo shidin dhowr cisho. Waxaana hubaal ah, haddii uu maamul-wanaag, kala-dambayn iyo is jeclaani ay jiri lahayd in la joojin lahaa gabigiisaba, Waxaana indhaha dadweynaha laga soo jeedin lahaa amma dowladda markaa jirtaa ay ku khasbi lahayd qofkii doonaya Faraawil indho-doogsi ah inuu beerto! Marka la beero waa la iib geyn lahaa ,sida waddamada Kenya iyo waddamo badan oo Afrikaan ah, oo samaystay beero casri ah oo ubax noocyo badan leh laga soo saaro oo ay uga soo hoyato dhaqaale gaadhaya balaayiin Doolar. Sidoo kale, dadkeenu way ku sharaxan lahayd gurigeeda ciddii u ciil-qabtaa amma u bukta faraawil, waxaana dalkeena ka soo gali lahayd lacag badan oo inaga filnaan lahayd wax badan oo aynu barino aduunka amma wax lagu sheego ‘Deeq-bixiye’. Sidoo kale, haddaynaan waxba hagranayn oo aynu wadaagayno talo fiican, oo aynu maamul-wanaag la imanayno, oo aynu kala dambayno waxa hubaal ah in magaalooyinkeena oo dhan aynu biyo gashan lahayn. Waxa waliba intaas dheer, Daraasadaha ay sameeyeen kuwa aynu baryeyno ay caddaynayaan, in Biyaha ku jira Somaliland ay yihiin kuwa ugu badan adduunka uguna macaan, xataa loo iib gayn lahaa waddamada Carabta iyo kuwo kale oo ay biyuhu ku yar yihiin.Waxan aminsanahay haddii lala imin laha dadaal in aysan cid inoogu imin lahey Biyo galinta Hargeysa.meel dheerba ha kadoonin, xoogeenii dihina ee dhalinyaradeena inta ka qaybgaleysey hawshaasi midba waxa uu qodila hal miter oo Pipeka la dhigo. Reer S/landka jooga USA u daa in ay keenan Dab-dhaliyasha Ka nooc nooc ee biyaha soo tuuraya Kharashka Gacanta farsamayaqaanada u da Reer S/land Carabta deggan.Ganacsatadiina ka qaad deyn ama takuleyn ay gashadaan Mashruuca.Dawlada iyadda wax qaabilsii.
Dhibaatadaasi kuma koobna Faraawilka, laakiin waxa kaba daran Qaadka, iyadoo boqolaal malyan oo doolar ku baxaan sannadkii. Talada fayow ee Maamul-wanaag waxanu ku kasban laheyn baahida xaddhaafka ee Waddanka Itoobiya ka jira ee Kaluunka badaheena ceegaga,iyo Milixda sida ugu fudud biyaha Bada looga sameeyo.
Haddii aynu ka soo qaadano tuduc gabayaagii waynaa Cabdilaahi Suldaan Timacadde Ilaahay ha u naxariistee wuxuu yidhi ‘Doqonimo kugu raagtay, ayaan ciddina ka dawayne’.
Waxaan ku soo gaba-gabaynayaa, wuxuu qof walba garanayaa ee ah in Dhicib iyo Dowladba aynu cagta ku hayno, waddo qaldan oo maamul-xumo ah, oo calaamatu-su’aal weyn saaraysa sii jiritaanka nolosheena markii aynu wax walba baabi’inay, iyadoo miyigeenii, xoolaheenii iyo beereheenii ay noqdeen wax aan jirin oo afkeena uun ay ku sii hadheen. Halka debaddii loo dhoof-dhoofi jirayna ay inaga soo oodmayso. Sidoo kale, waxay calaamatu-su’aal weyn saaran tahay sababta aynu isku waydiin waynay wixii lagaga gudbi lahaa dhibaatooyinkan oo uu maamul-wanaaggu ugu horreeyo,waxan oo kadeed ahna laaga bixilaha.Why we are suffering unnecessarily.
Waxa iyaduna xusid mudan hagrashada maamul-wanaagga, inaynu ka soo qaadano 3 masal. Waaggii ay jirtay dowladdii Siyaad Barre intii ay fayoobayd weeye, oo aynu inteena waa weyni aynu wada garanayno. Waxa waqtigaas aan ka hadlayno loogu taag waayey bulshadii Soomaaliyeed inay kalluunka la soo baxaan cunaana. Waxay markaa Dowladdii markaa jirtay soo saartay amar ah, in aan la qali Karin xoolo nool maalinta Arbacadda oo ay qasab kaga dhigtay bulshadii inay badda dad badan u foof tagaan, iyaddo lala barbartaagna aqoonta,iyo qalabkiiba. Taasi oo keentay markii dambe natiijooyin wanaagsan oo laga faa’iiday. Sidoo kale, waxay amar ku bixisay in aan la dhoofin Karin xoolaha dheddig si aanay u dabar go’in. Taasoo natiijo fiican oo dhinaca xoolaha ah keentay. Ta 3-aad, waxa waqtigaasi soo food saaray dhulkii wabiyada ee jannadu wadhnayd bacaad (ciid dabayli waddo oo meel walba ka dhigaysa Saxare). Ka dib waxay dowladdii go’aansatay in lagu beero deegaanadaas geedka loo yaqaan Tiinka si loogaga hor tago dhibaatada bacaadka, iyadoo madaxdii markaasi joogtay ay maalin walba kala qayb gali jireen beeritaanka geedka Tiinka. Taasi oo lagu najaxay 100%. Shacabkiina waxay ku barbar istaageen gacan, qalbi fayoban iyo tacab. Waxaan ku soo koobya lahaa, Ilaahow taladda wanaagsan na waafaji.
Fiiro gaar ah: sida aynu ognahay Soomaalidu waxbay isku cajiintaaye, waxa ka reebban qormadan in cid gaar ah loola jeedo amma lagu weerarayo sida kuwa keena Faraawiladda iyo qaadka, oo ay la mid yihiin kuwa keena beedka, Digaagga iyo Toonta.
Faraawiladda iyo qaadka, oo ay la mid yihiin kuwa keena beedka, Digaagga iyo Toonta. Ujeeddaduna tahay maxaa danteena guud u dan ah. Sidoo kale, ma jirto aqoon aan is bidayo oo aan dadka kale kaga wanaagsanahay Aqoonta Maamul-wanaagga, laakiin ay igu qasabtay shaqadayda oo ah Daaci, Mufakar, Samafale iyo Qoraa. LA SOCO,